IHoroscope yePisces: Umqondiso weZodiac wePisces, imihla, ukuhambelana, iimpawu kunye neempawu - Pisces
Umqondiso wezodiac wePisces IHoroscope yePisces
Umbala: IMauve, iLilac, iViolet, Amanzi aluhlaza
Usuku: NgoLwesine, ngoMvulo
Ngcono ukuhambelana ngokubanzi: Umhlaza, iScorpion
Ukuhambelana okugqibeleleyo kuMtshato kunye nobudlelwane: Enyulu
Ixesha: NgoFebruwari 19-Matshi 20
Iinqaba zamanqaku: Unovelwano, igcisa, intuitive, ithambile, ilumkile, imvumi.
Amanqaku abuthathaka: Uloyiko, ukuzithemba ngokugqithiseleyo, usizi, umnqweno wokubalekela inyaniso, unokuba lixhoba okanye umfeli-nkolo.
U-Aquarius uthanda: Ukuba wedwa, ukulala, umculo, uthando, imidiya ebonakalayo, ukubhukuda, imixholo yokomoya.
U-Aquarius akathandi: Abazaziyo, begxekwa, benobomi bexesha elidlulileyo babuyela kubo, inkohlakalo yalo naluphi na uhlobo.
IiPisces zinobungane kakhulu, ngoko zihlala zizifumana zikwinkampani yabantu abahluke kakhulu. Iipisces azinabugovu, zihlala zilungele ukunceda abanye ngaphandle kokulindela nantoni na. I-Pisces luphawu lwaManzi kwaye ngenxa yoko, olu phawu lwezodiac luphawulwa ngovelwano kunye nomthamo weemvakalelo. Iplanethi yabo elawulayo yiNeptune, ngoko ke iiPisces zinomdla ngakumbi kunabanye kwaye zinetalente yobugcisa. I-Neptune iqhagamshelwe kumculo, ngoko ke iiPisces ziya kutyhila ukhetho lwazo lomculo kumanqanaba okuqala obomi. Banesisa, banovelwano, kwaye banyaniseke kakhulu kwaye banenkathalo. Abantu abazalwe phantsi kophawu lweePisces banokuqonda okucacileyo komjikelo wobomi kwaye ngaloo ndlela balawule ukuba nobudlelwane obungcono beemvakalelo kunye nezinye izidalwa.
Iintlanzi ziyaziwa ngobulumko bayo, kodwa phantsi kweempembelelo ze-Uranus, iiPisces ngamanye amaxesha zinokuthi zithathe indima yomfeli-nkolo ukuze zitsale ingqalelo. Iintlanzi azizange zigwebe kwaye zihlala zixolela. Zikwaziwa ngokuba zinyamezela ngakumbi kuzo zonke iimpawu ze-zodiac.
Uthando kunye nesondo kwiPisces
Ngokunzulu kwiintliziyo zabo, iiPisces zizithandani ezingenakulungiswa. Banyanisekile kakhulu, banobulali kwaye banesisa ngokungenamiqathango kumaqabane abo. IiPisces ngabathandi abanomdla abafuna ukuziva uxhulumaniso lwangempela kunye namaqabane abo. Ubudlelwane bexesha elifutshane kunye nee-flings azikho uphawu lwalo mqondiso we-zodiac. Eluthandweni nakubudlelwane, banyanisekile ngokumfamekileyo kwaye banenkathalo enkulu.
Imnandi kwaye inenkathalo, iiPisces zinokuba ngabahlobo abalungileyo abakhoyo. Enyanisweni, badla ngokubeka iimfuno zabahlobo babo ngaphambi kwezabo. Banyanisekile, bazinikele, banemfesane, yaye nanini na kukho ingxaki entsatsheni okanye phakathi kwabahlobo, baya kwenza konke okusemandleni abo ukuyicombulula. I-intuitive enzulu, iiPisces zinokuva ukuba kukho into engalunganga, nangaphambi kokuba yenzeke. Iipisces zivakalisa kwaye aziyi kunqikaza ukukhupha iimvakalelo zabo kubantu ababangqongileyo. Balindele ukuba abanye bavuleleke kubo njengoko benzayo. Ukunxibelelana nabo babathandayo kubaluleke kakhulu kubo.
Umsebenzi kunye nemali yePisces
I-intuitive kwaye ihlala iphupha, iiPisces ziziva ngcono kwindawo apho izakhono zabo zokudala ziya kuboniswa, nokuba ngcono ukuba yeyesisa. Ubuchwephesha obuhambelana neePisces zezi: igqwetha, umzobi wezakhiwo, ugqirha wezilwanyana, imvumi, unontlalontle, kunye nomyili wemidlalo. imida. Lo mqondiso wezodiac unovelwano, usebenza nzima, uzinikele, kwaye uthembekile. IiPisces zizisombululi zeengxaki ezilungileyo.
Ubukhulu becala, iiPisces azikhathali kakhulu ngemali. Ngokuqhelekileyo bajolise ngakumbi kumaphupha kunye neenjongo zabo, kodwa baya kuzama ukufumana imali eyaneleyo yokufezekisa iinjongo zabo. Kulo mmandla, kunokubakho amacala amabini ePisces: kwelinye icala, baya kuchitha imali eninzi ngaphandle kokucinga, ngelixa kwelinye icala, banokuba lukhuni kakhulu. Ukanti, ekugqibeleni, kuya kuhlala kukho imali eyaneleyo yobomi obuqhelekileyo.
Indlela yokukhohlisa indoda yePisces
I-Romanticism ilawula ihlabathi lamadoda ePisces. Indoda ezelwe phantsi komqondiso wePisces iphila ukukholisa nokuthanda. Indlela efanelekileyo yokukhohlisa indoda yePisces kukuvula kuye ngokupheleleyo. Ezinye zezona mpawu zibalaseleyo zePisces bubuntununtunu, imfesane kunye nobubele. Bangabantu abathobekileyo abayiqondayo into oyifunayo kwaye bayizise kuwe rhoqo kangangoko kunokwenzeka.
Bahlala bekhangela iindlela zokunceda abanye kwaye bazi kakuhle into oyifunayo phantse ngaphambi kokuba uyazi. Umnqweno wabo wokukholisa ubenza babe sesichengeni sokuqhathwa nokuxoka. Baya kusebenzisa intelekelelo yabo ukukukholisa. Indoda yePisces iyakuthanda ukuhleka, ukuba ifumanisa ukuba uhlekisayo kwaye kulula, usendleleni efanelekileyo yokumhenda.
Babonakala bezolile ngaphandle, kodwa ngaphakathi uya kufumana umntu owahlukileyo, njengoko indoda yePisces ilwa neemvakalelo ezinamandla. Mkhuthaze ukuba avule kwaye akhulule ezo mvakalelo. Enye yezona mpawu zibalaseleyo zePisces kukukwazi kwabo ukunxibelelana neemvakalelo zabanye abantu. Ngoko ke, ukuba uthandana nendoda yePisces, unokulindela ubudlelwane obunomvuzo ngokweemvakalelo.
Indlela yokukhohlisa umfazi wePisces
Abafazi bePisces baziwa njengabantu abanobubele, abacingayo, abanovelwano, abangazicingeliyo, nabanovelwano kakhulu. Ukuba ufuna ukutsala umfazi ozelwe phantsi kweempawu zePisces, kufuneka ube nothando kwaye ube noburharha. Kwakhona kubalulekile ukuba ngumphulaphuli olungileyo. Ubuntu bePisces bunovelwano kwaye bugcwele uthando olungenammiselo. Nje ukuba uyibambile ingqalelo yakhe, uya kukuvulela isifuba ngokukhawuleza. Ukwabelana ngesondo kunye nomfazi wePisces kuya kuqhushumba kwaye awusoze udikwe naye kwigumbi lokulala.
Ibhinqa elizalwe phantsi komqondiso weePisces linandipha iingxoxo eziphilileyo malunga nezinto zokomoya kunye namandla angaphezu kwawemvelo. Unengqondo kwaye uya kuqonda ngokukhawuleza ukuba yonke into oyifunayo sisini kuphela. Ufuna ukuphathwa ngentlonipho, kwaye awusoze ukwazi ukumrhwebesha ngokupheleleyo ngemihla yokuqala. Ukuba unyanisekile kwaye uvulele kuye, ngokukhawuleza uya kuziva enxibelelene nawe.
Umfazi wePisces unovelwano kakhulu ngokwemvelo, ngoko akayi kuxolela okanye alibale ngokulula. Ukuba intliziyo yakhe iye yabuhlungu kwixesha elidluleyo, uya kukufumanisa kunzima ukuphinda avuleleke kulwalamano olutsha lothando.
Iimpawu ezihambelana neePisces: Capricorn , Umhlaza , Unomadudwane , Inkunzi yenkomo
Virgo Iiary Umhlaza Khetha Uphawu Capricorn